COVID-19: Iyo Corona Pandemic uye Yemagariro Media | Martech Zone
COVID-19: Iyo Corona Pandemic uye Yemagariro Midhiya
Chipiri, May 5, 2020 Chipiri, May 5, 2020 Hardik Oza
Kana zvinhu zvanyanya kushanduka, zvakanyanya kuramba zvakangofanana.
Chinhu chimwe chete chakanakira pasocial media: haufanire kupfeka mamask. Unogona kuburitsa chero chinhu chero nguva kana nguva yese sezvazviri kuitika panguva idzi dze COVID-19 dzakarova. Iyo denda rakaunza dzimwe nzvimbo mukutarisa kwakapinza, dzakapinza mativi akapoteredzwa, dzakawedzera mabhanan'ana, uye, panguva imwechete, yakavhara mimwe mipata.
Ivo vanoshanda savanachiremba, varapi vezvematongerwo enyika, uye avo vanodyisa varombo vanozviita vakavhara muromo kumashure kwemasiki. Avo vanokanganiswa zvakanyanya nedenda iri uye vasina dzidzo havawani nzira yekushandisa vezvenhau kurega nyika ichinzwa kuchema kwavo kwenzara. Mafuta akakodzwa anogoverana mabikirwo uye vanoshandisa vezvenhau kuratidzira mafambisiro avari kuita nguva.
Ndeapi Masocial Media Ari Kuitira Iyo Denda?
Facebook zvakataurwa vakapa mafirita mazana masere nemazana manomwe ezviuru uye vakavimbisa kunotora nekupa zvimwe. Yakavimbisa kupa madhora zana nemakumi masere nemashanu emadhora kuvashandi vehutano nemabhizimusi madiki.
Whatsapp yakagadzira Coronavirus ruzivo hub uye yakabvumidza WHO kuvhura chatbot yekuyambira vanhu nezve coronavirus njodzi. Zvine anonzi akavimbisa madhora miriyoni imwe chete to Poynter Institute Yenyika Dzese-Yekutarisa Network kutsigira coronavirus chokwadi mubatanidzwa uripo munyika makumi mashanu nemakumi mashanu kuburikidza nemasangano zana emuno. Iko kune 40% kuwedzera muWhatsapp kushandiswa.
Instagram inoda kurumbidzwa nekuda kwayo kutora matanho ekudzivirira kupararira yemashoko asiri iwo.
Twitter vashandisi vakawedzera muhuwandu neinenge 23% mumwedzi mitatu yekutanga ye2020 uye chikuva chiri kurambidza maTweets anogona kukanganisa kupararira kwecoronavirus. Twitter iri kupa madhora miriyoni imwe ku Komiti Yokudzivirira Vatori venhau uye International Women’s Media Foundation.
LinkedIn yakavhurwa makosi gumi nematanhatu ekudzidza iyo vashandisi vanogona kuwana mahara uye iri kutsikisa matipi ebhizinesi pane izvo zvavanofanira kutumira panguva yedenda riri kuenderera.
Netflix anovimbisa zvinyorwa zvitsva kuchengetedza vanhu kuvaraidzwa panguva yekumanikidza kukiya.
YouTube irikuita zvishoma ne kudzvinyirirag ads zvine chekuita kuna Coronavirus.
Sprinklr akaunganidza nhamba iyo inoratidza COVID-19 uye coronavirus zvine hukama mazwi akataurwa pamusoro pe makumi maviri emamirioni nguva pasocial media, nhau, uye maTV saiti.
Rondedzero inoenderera ne Snapchat, Pinterest, uye dzimwe nzira dzezvekudyidzana nevanhu dzichipinda mukati. Izvo zvese kune zvakanaka asi vanhu vari kushandisa sei vezvenhau panguva yedenda?
Kunaka kweSocial Media
Vanhu vanofanirwa kugara pamba nekumanikidza uye izvo zvinotungamira mukushandisa yakawanda nguva pasocial media. 80% yevanhu vanodya zvimwe zvirimo uye 68% yevashandisi vanotsvaga zvemukati zvine hukama nedenda. Nekutenda, havazi vese vari kungopfuura nguva.
Vagari vashoma vane hanya vakagadzira dandemutande revanhu ravanopa nekugovera zvekudya zvakabikwa kumba kune vanoshaiwa kunze kwekunongedzera nzvimbo dzekugara nehutano hwekutanga kune vanoshaya mumaguta avo. Semuenzaniso, boka revanhu vanobva kuMumbai rakatanga kushandisa zviwanikwa zvavo kubika chikafu nekuchigovera kune vanoshaya. Yakakura ikava yekubatsira uye webhusaiti ine vanhu vazhinji vanobatana muchiitiko ichi kune mamwe maguta.
K Ganesh weBhasikiti Huru, Juggy Marwaha weJLL, uye Venkat Narayana wePrestige Boka vatangisa kutanga FeedmyBangalore kubatsira vanotambura mune zvehupfumi panguva yeiyi Covid19 denda. Ivo vanozopa chikafu kune vangangoita 3000 vana vanotambura nemhuri dzavo kuburikidza Parikrma Hunhu Hwevanhu. Chinangwa chavo ndechekushandira 3 lakh chikafu panguva yekuvhara.
Mufananidzo chikwereti: JLL
NGOs vari kuita zvavo kupa chikafu, sanitizers, grocery kits, uye masks panguva yekupararira kwedenda.
Vakakurumbira vanozviputira nemazano emahara ekuchengetedza nekuchengetedzwa. Zvinofungidzirwa kuti vanhu vanogamuchira kuraira kana zvichibva kune vane mukurumbira.
Zvisinei, kune zvakaderera, zvakare.
Zvakaipa zveSocial Media
Kana paine nzara yakapararira uye vanhu vari kuziya nenzara kune vakakurumbira vanoshandisa mukana wezvemagariro kutaridza zvekunze zvekubika zvavari kugadzirira senzira yekupfuura nguva.
Kwete muIndia chete asi pasirese, kunyanya muUS nemuEurope, maMuslim vanga vari panogamuchirwa nzvimbo dzekuvenga vachipomera nharaunda yese nekuda kwechirwere ichi. Nhau dzefake uye vhidhiyo, pamwe nekukurudzira zvinyorwa, zviri kuwedzera, chinova chinhu chinosuwisa.
Mapato ezvematongerwo enyika anoedza kugadzira huswa apo COVID Zuva richipenya. Ivo vanogona kuratidza kuwedzera kunzwisisika pane kuita zvematongerwo enyika hutachiona.
Semazuva ese vasina kutendeka vanotora mukana wevezvenhau kupushira mishonga yekunyepedzera ingave ine njodzi kupfuura COVID-19. Vamwe vanoshuva kushambadzira iwo mukana. Vamwe vanopa kuraira kana nhau dzinogona kutsausa senge: MaChinese anoronga nemaune kukanganisa nyika nekutora…, Sip mvura uye gargle kugeza pasi hutachiona…, Idya mbishi gariki…, Shandisa weti yemombe nendove yemombe…, Mwenje mwenje nemakenduru uye kupisa zvinonhuwira kudzinga korona… Vana havagone kuibata… zvichingoenda zvakadaro. Ikozve kune vanhu vari kupa corona yekutevera maapplication ane malware.
Musoro wakashata wecommunism unowana ivhu rakaorera munhau dzezvemagariro uye kumuka kwacho kunogona kuramba kuripo mushure mekunge coronavirus yanyangarika kana kudzikira.
Kushambadzira Ine Humane Kubata
Runako rwemagariro enhau nderekuti iwe unogona kutarisisa zvakaringana mukusimudzira yako mhando uye mukurumbira uye iwe unogona kuishandisa chete kune kushamwaridzana kudyidzana. Kushambadzira nhasi kwachinja chimiro chayo zvishoma kuwedzera patina ine hunhu kune kwayo chiitiko.
Makambani izvozvi anoshandisa vezvenhau kuratidza kunetsekana nevatengi uye vanosvika pakubatsira munzira ipi neipi yavanogona, kwete kungobatsira zvinoenderana nezvechigadzirwa. Ino inguva yekuvaka kuvimba, kusimudzira kuvimba, nekusimudzira hukama. Makambani ane hanya ari kuita izvo chaizvo. Gamuchira kufarira nhasi. Icho chinoshandura kune mari gare gare nekuti vanhu vanoyeuka.
Vatengesi veDhijitari vaishandisa akakosha mazwi akakosha kubva mukutsvaga. Iye zvino ivo vanofanirwa kutsvagisa mazwi akakosha nekusimbisa pane COVID-19 mazwi ane hukama kuti vagadzire akasiyana uye anotaurisa zvinangwa. Mumwe anofanirwawo kugara achifunga muBrandwatch kutsvaga kuti iko kufunga kwakatenderedza maporoma ane chekuita nehutachiona kwakanyanya kunaka.
Chinhu chimwe chakakosha pamusoro pe denda rinokanganisa pasocial media ndeyekuti Youtube, Facebook, uye Twitter vari kushanda kuti demokrasi ruzivo uye detoxify chepfu mbiru.
Kubva pane yakajeka maonero, mumwe anogona kutaura kuti avo vari kushandisa pasocial media kuita zvakanaka vanozozviita uye avo vanofarira kushandisa vezvenhau kuita misikanzwa vanozozviita. Denda rakachinja zvinhu zvishoma pasocial media asi, sezvavanotaura, pazvinowedzera kuchinja zvinhu, ndipo pavanoramba vakafanana. Tichaziva, mwedzi mitanhatu kubva zvino.
Tags: COVID-19chokwadi-kutarisaJuggy MarwahaK GaneshNetflixpandemicmukurumbira bokapasocial media zvakashatapasocial media zvakanakaTwitterwhatsappYouTube
Hardik Oza murapi weSEO ane anopfuura makore 9 ezviitiko. Anobatsira makambani kusimudzira mabhizinesi avo. Anogovana pfungwa dzake pane zvimwe zvinyorwa zvakaita seSEMrush, Tsvaga Injini Vanhu, uye Zvemagariro Media Nhasi. Mutevere pa Twitter @Ozaemotion.
Ndeipi Yakanakisa B2C CRM Yako Bhizinesi Ridiki?
Maitiro Ekutsvaga Mafonti neAdobe Capture